Hollywood ရုပ်ရှင်ကားများနှင့် ရင်ဘောင်တန်းလာသောြ...
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = စင်္ကာပူ (ဇာတ်သိမ်း)
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = စင်္ကာပူ (၃ - အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ ၀င်...
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = စင်္ကာပူ (၂ - အလုပ်အကိုင်)
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = စင်္ကာပူ (၁)
စာဖတ်သူများလဲ အောက်မှာ ကျနော်ပြန်လည်တင်ပြထားတဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ချင်လာကြမယ်လို့ ထင်
Youtube မှတော့ ရှာလို့ မရတာနဲ့ ..ရမ်းတမ်းရှာလိုက်တာ..အောက်က လဒ့်ကိုရရှိလိုက်ပါတယ်။
“ကယ်ရီ” ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အောက်ကလဒ့်ကိုသွားပါဗျာ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:06 PM No comments:
Hollywood ရုပ်ရှင်ကားများနှင့် ရင်ဘောင်တန်းလာသော မြန်မာ့အနုပညာ
* Posted by ကိုကိုပေါသွပ် on November 7, 2010 at 4:31pm
* View ကိုကိုပေါသွပ်'s blog
မြန်မာရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများအပေါ် အမြင် (၄) (သို့မဟုတ်) ဖားတုလို့ ခရုခုန် ဖင်ပြဲရုံသာရှိပေတော့မည့်
ထိုဇာတ်ကားဟိုးတလောက YouTube မှာ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ တင်ခဲ့ပေမယ့် .. အကုန်လုံး မတင်နိုင်ခဲ့
Digital Right မရှိလို့ဆိုပြီးYouTube က ဖျက်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သီချင်းတွေ ခိုးဆိုတာတို့ဘာညာတွေ ရှိတယ်။ Picasso
ရဲ့ Good artists
artists steal ဆိုတာ မျိုး ရှိစေအုံးတော့မြန်မာစကားမှာ “ဖားတုလို့ ခရုခုန် - - -သာရှိပေမည်” ဆိုတာမျိုးလည်း
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဇာတ်ကားလို ဟိုကော်ပီ ဒီကော်ပီတွေ လုပ်မယ့်အစားမိမိနိုင်ငံနဲ့ သင့်တော်မည့် လူတွေကို တကယ့်
ကို ပညာရစေမည့်ဇာတ်ကားမျိုး ရိုက်သင့်တယ်။
ဒါကတော့ မြန်မာဇာတ်ကားပါ ပြကွက်ပါ
ထိုကဲ့သို့ ဟိုးရှေးပဝေသနီကမော်တော်ကားကို အိညောင့် အိညောင့်နဲ့ မညီမညာလမ်းတွေမှာ မောင်းနေတဲ့ ကျွန်ှပ်
ဒါကတော့ မူရင်း Transporter ဇာတ်ကားမှ ရှုခင်းတွေပါ .. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ထိုကဲ့သို့သာယာတဲ့ နေရာမျိုးတွေ
ရှမ်းပြည်မှာရှိပါတယ် ဗျာ .. တူစေချင်လည်း သွားရိုက်ပေါ့ :D
သူက မူရင်းအတိုင်းဇာတ်ကားအတိုင်း ကားဘီလည်းသဗျာ .. ဒါပေမယ့် ဘီးမပြတာမပါဘူး အခုလိုပဲပြီးသွားတယ်
အင်း .. မူရင်းကားရဲ့ မော်တော်ကားက အဆင့်မြင့်မြင့်ဗျ။
မြန်မာကားများ ဘယ်လောက်ချွေတာလည်း ဆိုရင် မင်းသမီးကို ရေပဲ တိုက်ရှာသဗျာ
မူရင်းကားကတော့ Orange Juice ဗျ.. အင်း .. ရိုက်မယ့်ရိုက်လည်း ရေ တိုက်မယ့်အစား သူ့လိုOrange Juice
လေးဘာလေး မင်းသမီးကိုတိုက်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး .. ချွေတာ သဗျာ .. ဟီး ဟီး ဟီး
မြန်မာကားများ ချွေတာချက်ကတော့ လူထည့်လာတဲ့ အိပ်က ဆာလာအိပ်
ဒါက မူရင်းဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီး Qi Shu ထည့်လာတဲ့ အိပ်ဗျ
ဒီ သရုပ်ဆောင်မှုကို မြန်မာကားမှာ ကြည့်ရင် အရမ်းရယ်ရတယ်။ မင်းသမီးရေသောက်ဖို့အတွက် ဓါးနဲ့ ပါးစပ်က
ပလာစတာကို ဖောက်ပြတာမပြဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းသားရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု့ကို ဓါးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ ..
အခုလို သေသေချာချာလည်း လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ဓါးနဲ့ ခွဲပြတော့ ဘာဖြစ်မှာကြနေတာလဲ ဗျာ .. ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်
ထိုလိုအခန်းမျိုးတောင် ပီပီပြင်ပြင် မရိုက်ရဲမှန်းသိသာသွားတယ်
အဲ အဲ .. ဒီပြကွက်ကြည့်တိုင်း တဝါးဝါးနဲ့ ရယ်ရတယ် .. မင်းသမီးကို မင်းသား မလာပုံများ အညာမှာ ရှင်လောင်း
ဒီလို လုပ်ပါဗျာ။ ကျားကျားယားယား အားကောင်းမောင်းသန် ဆိုတဲ့ သဘောလည်း ဆောင်ရာရောက်တာပေါ့ ဗျာ။
မူရင်းကားမှာတော့ မင်းသားခမျာတောင်ခမုလေးပေါ်သို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မင်းသမီးကို ဖမ်းလာရင်း ဒီလိုထမ်း
တက်ရတယ်။ မြန်မာကားကတော့ အပေါ်ကလို ရှင်လောင်းလှည့်တဲ့ အတိုင်းချီပြပြီး ပြီးသွားပါလေရော .. သြော်
ကံချင်ꨳကွာပ .. ပင်ပင်ပန်းပန်းသရုပ်ဆောင်စရာတောင် မလိုဘူး။
အဲ အဲ .. မြန်မာဇာတ်ကားတွေရဲ့ လူဆိုးတွေပေ့ါဗျာ .. ကုတ်အကျီ င်္အမည်းတွေကို မချွတ်တမ်း လူဆိုးမှန်းသိအောင်
ဒီအခန်းမှာ ပြောသွားတဲ့ Dialogs တွေ အားလုံးဟာ မူရင်း Transporter ကားထဲက အတိုင်းပါပဲ .. ၁၀ စက္ကန့်အချိန်
ပေးမယ် ထွက်သွားတို့ .. ၅ စက္ကန့်အချိန်ပေးမယ် .. မင်းငါ့အကျီ င်္ကိုလွတ်လိုက်ပါတို့ ဆိုတာ .. ဒါများ ဇာတ်လမ်း
ဘယ်သူ ဇာတ်ညွှတ်းဘယ်သူလုပ်နေသေးတယ် .. ဘာသာပြန်သူ ဘယ်သူ ဆို ဟုတ်သေးဗျာ
ဒါက မူရင်းဇာတ်ကားရဲ့ ပြကွက်ပါ
မြန်မာကားက ပေါချက်က ကမ်းကုန်တယ် .. မူရင်း The Transporter ကားမှာ လူဆိုးတွေနဲ့ Fighting ချရင်း
မင်းသားက ကုတ်အကျီ င်္ကို အကျီ င်္ချိတ်မှာ လှမ်းချိတ်တယ် .. မြန်မာကားကတော့ ဘယ်ကာရာအိုကေ
စင်တင်တေးဂီတလည်း မသိ .. အတည်ပေါက်နဲ့ Microphone Stand မှာ သွားချိတ်တယ် .. ပေါပ ဗျာ .. သူတို့
ကအတည်ပေါက်ရိုက်ပြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က မပြုံးပဲ ဝါးလုံးကွဲအောင်ရယ်ခဲ့ရတယ်
မူရင်းကားမှာတော့ တကယ့် အကျီ င်္ချိတ်ကို လှမ်းပြီး ချိတ်တာပါ
ထိုသို့ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် မာမား ခေါက်ဆွဲဘူးများအား ကြွေးတဲ့ အခန်းပေါ့ဗျာ
မူရင်းကားကတော့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ် ဗျ။ အင်း ဒီတစ်ခေါက်တော့ ခိုးချပေမယ့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ် နဲ့
ခေါက်ဆွဲဘူး ယှဉ်ကြည့်တော့ခေါက်ဆွဲဘူးက ဈေးနှစ်ဆလောက်ပိုတော့ မြန်မာကားက နည်းနည်း သာသွားတယ်
ဗျာ .. ဟီး ဟီး ဟီး
ဒီဇာတ်ခန်းလောက်ကြောင်တဲ့ ပေါတဲ့ အခန်းမရှိဘူး .. အခုလို သင်္ကြန်လည်တဲ့အတိုင်း ကုတ်အကျီ င်္တွေဝတ်လာတဲ့
လူဆိုးတွေPickup ကားပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်လိုက်လာကြလေရဲ့ဗျာ .. ဘယ်လိုလူမျိုးက အခုလို ကုတ်အင်္ကျီင်္တွေဝတ်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်လာမလဲ ဆိုတာ မစဉ်းစားကြဘူး .. အံ့သြတယ်ဗျာ
ဘော်ဒီကို ကြွားချင်ရှာပေမယ့် .. ခါးမှာ အဆီတွေရစ်နေပြီး ဗိုက်ခေါက်ထွက် နို့တွေတွဲကျနေတော့ ခက်သား
ဘော်ဒီ ကြွားချင်လည်း .. မူရင်းကားရဲ့ မင်းသားလို လုပ်ပါဗျာ .. :)
အဲ အဲ .. လုပ်ချပြန်ပြီ .. ကုတ်အကျီ င်္ဝတ်တဲ့ အခန်း
ဒါက မူရင်း The Transporter က မင်းသား ကုတ်အကျီ င်္ဝတ်တဲ့ အခန်းပါ
မြန်မာကားမှာ သေနတ်မကိုင်ရလို့ အခုလို ဂျိုင်းကြားမှာ ပုစိန်နှစ်ချောင်း အတည်ပေါက်နဲ့ ထိုးထားလေရဲ့ ဗျာ ..
ဒီဇာတ်ကားမှာ ကြည့်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ မပြုံးပဲ ဝါးလုံးကွဲရယ်ခဲ့ရတဲ့ ပြကွက် ခပ်ဆန်းဆန်းပါ ..မင်းသား
ကားမောင်းလာတာကို ပြေးဝင်တိုက်ကျတဲ့ မြန်မာကားမှ လူဆိုးတွေပါ.. ဘယ်သူကမှာ ကားမောင်းလာတာကို
ပြေးဝင်တိုက်ကျမယ်လို့ မထင်မိပါဘူးဗျာ .. အံ့ရော အံ့ရော
မူရင်းကားရဲ့ နာမည်အရင်းကတော့ "The Transporter" ပါ .. အောက်က ဓါတ်ပုံကတော့ မြန်မာကားရဲ့ နာမည်ပေါ့
မြန်မာကား နာမည်ကတော့ "Carry" တဲ့ ဗျာ .. ရယ်လိုက်ရတာ ခွက်ခွက်လန် .. ပေါတယ် ဗျာ
မြန်မာကား မြန်မာပြည်က သရုပ်ဆောင်တွေကို ဇွတ်ကြီး မျက်စိမှိတ်ပြီး ကြိုက်တဲ့ သူတွေက အရင်က ပြန်ပြန် ငြင်း
ကျလွန်းလို့အခုလို Screen Shotတွေနဲ့ရေးလိုက်ရတာပါ။ ထိုဇာတ်ကားအတွက် ကုန်ကျမည့် ငွေကြေးပမာဏအား
တကယ့်ကိုအသုံးကျမည့် ပညာပေး အနုပညာရသမြောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို အခြေခံတဲ့ဇာတ်ကားမျိုး ရိုက်လို့ရပါ
တယ် ဗျာ။ ပြကွက်တွေကို ပြောပြရင် မယုံမှာစိုးလို့ အခုလို ScreenShot တွေနဲ့ရေးရခြင်းပါ။ ကျွန်တော်ရေးသမျှ
လာငြင်းနေရင်လည်း အဲဒီလာငြင်းနေတဲ့သူဟာ ရူးနေတဲ့ သူလို့ပဲမြင်မိမှာပါပဲ။
ရှမ်းကလေး (အီးမေးလ်မှ စာအားပြန်၍ တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:56 PM No comments:
ကျနော်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ ရာသီဥတုကပူတော့ စာတွေရေးရတာသိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ လူကပူတော့ ခေါင်းပူတာ
သျှမ်းနှစ်သစ်ကူးဖြစ်မယ့် ၁၄ ဒီဇင်ဘာ နီးလာသလို..သတိရစရာတွေကလဲ များများလာပါတာပေါ့ဗျာ။ ကခဲ့တာတွေ၊
ဆိုခဲ့တာတွေကို..အမြဲလိုလိုပဲ သတိရနေပါပြီ။ စကာင်္ပူရောက်တုန်းကတောင်..ညီ၊အစ်ကို၊ မောင်၊ နှမတွေ အက
တိုက်တာကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါသေးတယ်။
အခုရေးမှာက အပေါ်ကနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ လမ်းကြုံလို့ကြေငြာဝင်တာပါ။
မြန်မာ ဘတ်လ်ပို့ လေးတွေကိုင်ပြီးခရီးထွက်ရင်တော့ဗျာ..ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက် (အာရှနိုင်ငံများ) အထင်အ
အမြင်သေးတာကတော့ ခံရစမြဲ (အမြဲတမ်းခံရတယ်လို့ ပြောရင် အရမ်းမှန်သွားမှာစိုးလို့ ) ပါပဲ။ ဆူးပေါ်ဖက်ကျ၊
ဖက်ပေါ်ဆူးကျ လဲ..ဖက်ကပဲခံရသလိုပါပဲ။ စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာလဲ အထင်အမြင်သေးတာတွေခံရပါတယ်။
မြန်မာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာ ဗွမ်း (ပွား) ခနဲ့ ပေါ်လာတာက ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေမှာကိုး။ တစ်
ကယ်လဲပဲ ဆင်းရဲလို့ သူတို့ နိုင်ငံမှာလာလုပ်တာပဲလေ။
လ.၀.က (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး) ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာဘတ်စ်ပို့ ဆိုရင်တော့ သေသေချာချာကြီးကို စစ်ဆေး
ပါတော့တယ်။ (တခြားရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလဲ အဲလိုပါပဲဗျာ။ အားငယ်နေမှာစိုးလို့ ပါ။ )
အလုပ်အကိုင်လုပ်ပြီဆိုရင်လဲ..မြန်မာကဆိုရင်..သူတို့ က အထင်မကြီး၊ ခပ်ချဉ်ချဉ်လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ အဲ..
အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ သက်သေပြနိုင်ရင်တော့ သူတို့ အမြင်တွေပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမှာပေါ့ဗျာ။
လွန်ခဲ့သော လတုန်းက စင်္ကာပူမှာလုပ်အားခနည်းတာဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေက ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်သေးပြီး
(တင်းသိမ်တတ်တာလေ) မလေးကလူအဲလောက်ရတယ်..ငါဒီလောက်လေးရရင်လဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်
ဓါတ်မျိုးရှိလို့လစာနည်းပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တခြားအကြောင်းတွေကတော့.. ကိုယ်က ပေါင်နှံပြီးလာရတာရယ်၊ ပွဲစားခတွေရယ်နဲ့အကြွေးတွေရှိလာတော့
ရရာကိုလုပ်ရတာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လဲ လစာတွေနည်းတတ်ပါတယ်။ (ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလေးတွေရှိရင်တော့ကောင်း
နောက်တစ်ခုက... အများအားဖြင့်ကလဲ..ပြန်မပြောတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေရှိနေလေတော့ လူများက ပိုပြီးတော့
နိမ်တာတွေကြောင့်လဲ..လစာနည်းတတ်ပါတယ်။ (ပြန်ပြောရင်..အလုပ်ထုတ်မယ်လေ။ အလုပ်ထုတ်ရင်..အကြွေးဆပ်
ဖို့ဒုက္ခရောက်မယ်။ ဒါတွေကြောင့် အောင့်အီးပြီးနေကြရတာပေါ့ဗျာ။)
ဘာသာစကားမကျွှမ်းကျင်မှု၊ ခိုင်လုံတဲ့ ပညာအရည်အချင်းပြ စာတမ်းတွေမရှိမှု..ဒါတွေကလဲ.. လစာနည်းစေပါ
လူငယ်တွေကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်မရှိဘူး...နိုင်ငံခြားသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာတွေ တော်
တော်များများကို ရှိလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သွားမယ်ဆိုရင်.. သေသေချာချာပြင်ဆင်မှုတွေရှိသင့်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ..အလုပ်ပေါမပေါတော့မသိပါဘူး။ အလုပ်ရှိမရှိဆိုတာထက်..ကျနော်အရင်က ပြောခဲ့တဲ့အရာများတွေ
စီးပွားရေးရဲ့သဘောသဘာဝအရဆိုရင်...အလုပ်လုပ်တဲ့သူကများပြီးတော့ အလုပ်ကို မပံ့ပိုးနိုင်ရင်တော့ အဲဒီနိုင်ငံ
မှာအလုပ်အကိုင်ရှိဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ ကိုယ်က မဖြစ်မနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဟိုက အသိမိတ်
ကျနော့်..အတွေ့ အကြုံအရတော့...အလုပ်သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ အလုပ်ရှိလို့ ရခဲ့ရင်တော့မှ...စိတ်ဖိစီးမှုတွေ...
ကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်လေ..နေ့ တိုင်းလူတွေသွားနေတာ..ကိုယ်က တခုခုအမှားလုပ်မိလို့ ကတော့
အလုပ်ထုတ်ပြီး..အသစ်ကောက်ခန့် ယုံပဲကိုး...အဲလောက်ထိ လူများနေတာအဲဒီမှာ။
ဟောဗျာ....ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့မသွားပါနဲ့ လို့ တားမြစ်သလိုဖြစ်နေပါလား။ ဒုက္ခ။ ကဲကဲ..စာဖတ်သူတို့ ရေ..
တစ်ချို့ ကိစ္စတွေက ကိုယ်တိုင်ကြုံမှယုံရမယ့်အရာတွေလဲ ရှိနေလေတော့...မသွားပါနဲ့ လို့ လဲ မပြောဘူး။
စာဖတ်သူများအနေနဲ့ဖတ်ပြီးလို့ ..သွားဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲ...ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေ ပြင်ဆင်နိုင်လို့အဆင်ပြေ
ဖတ်ပြီးလို့ ....ဟာ...မဖြစ်နိုင်တာလို့ ထင်ရင်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ပြီးတဲ့အထိဖတ်လို့ လေ)
သြော်...ပြောရအုန်းမယ် အဲ..ရေးရအုန်းမယ်။ ဒီလိုဗျ..ဒီလို။ ခုကျနော်ရေးပြနေတဲ့ စင်္ကာပူက ဖြစ်ရပ်တွေကိုဘယ်
လိုလုပ်ပြီးတော့များ သိနေတာလဲလို့မေးချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ (မမေးချင်လဲပြောမှာပဲ)
ကျနော့်အလုပ်မှာ..ကျနော်က အချက်အလက်စုဆောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ဖေါ်ပြလိုက်တဲ့ အချက်အလက်
တွေကလဲ...စင်္ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်၊နှမ တွေကပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အလုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလဲ လူငယ်လူရွယ်တွေကို သတင်းအမှန်တွေရရှိစေပြီး..ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ
လုပ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်တာပါ။ ပညာပေးပေါ့ဗျာ။ ဘလော့လ်က အလုပ်နဲ့ ဆိုင်လားဆိုရင်မဆိုင်ပါဘူး။ စေတနာ သက်သက်
နဲ့ ဝေမျှတာပါ။ (ကြေငြာတာ..ကြေငြာတာ)
ရှမ်းကလေး (အားလုံး ကောင်းရာလိုအင်ဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံပါစေဗျာ။ သျှမ်းနှစ်သစ်ကူးလေးမှာလဲ..ပျော်ရွှင်
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:22 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:00 AM No comments:
အမေရိကားရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ရဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။
တစ်ခါက တက္ကသိုလ်တခုတွင် ကျောင်းဆင်းခါနီး ဆရာက ...."ကစားနည်းတခုကစားရအောင်..ဆရာနဲ့အတူ
ဘယ်သူပါဦးမလဲ" ကျောင်းသူတဦး ထရပ်ပြီး စတိတ်စင်ပေါ်တက်လိုက်သည်။
ဆရာက "သင်ပုန်းပေါ်မှာ ကိုယ့်နဲ့အရင်းနှီးဆုံး လူ(၂၀)ဦးရဲ့ နာမည်ကိုရေးလိုက်ပါ"သူမက ဆရာပြောသည့်အတိုင်း
အိမ်နီးချင်း၊ သူငယ်ချင်း၊ဆွေမျိုးသားချင်း၊ မိသားစု နာမည်များကို ရေးချလိုကသည်။
ထို့နောက် ဆရာက "အဲဒီ နာမည်တွေထဲက မရှိလဲဖြစ်တယ်၊ မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်တဲ့နာမည်ကို ဖျက်လိုက်ပါ"
အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်၏ နာမည်ကို သူမ ဖျက်လိုက်သည်။
" နောက်တစ်ယောက် ထပ်ဖျက်လိုက်ပါဦး"သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ နာမည်ကို ဖျက်လိုက်ပြန်သည်။
ဆရာပြောတိုင်း သူမက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဖျက်လိုက်နှင့် နောက်ဆုံးသင်ပုန်းပေါ်တွင် လူသုံးဦးသာ
ကျန်ခဲ့သည်။ ထိုသူများမှာ မိဘ၊လင်ယောက်ျားနှင့် သားသမီးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများ အားလုံး စိတ်ဝင်တ
စားသင်ပုန်းကိုသာ စူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်။ စာသင်ခန်း တစ်ခုလုံးမှာတိတ်ဆိတ်နေပြီး ကစားနည်း တစ်ခု
ဆရာကတည်ငြိမ်သော အသံဖြင့် နာမည်တစ်ခု ထပ်ဖျက်ခိုင်းပြန်သည်။ သူမမှာအရွေးရခက်သောဟန်ဖြင့်
အကြာကြီး စဉ်းစားပြီးမှ မိဘ ဆိုသည့် နာမည်ကိုကြက်ခြေခတ် ဖျက်ချလိုက်သည်။
"နောက်တယောက် ထပ်ဖျက်လိုက်" ဘေးမှ ဆရာ၏ အသံက ထပ်မံ ထွက်လာပြန်သည်။ဒီတစ်ခေါက် သူမဖျက်ချ
ဖို့ လက်မြှောက်ရာတွင်ပင် အင်အားကုန်ခမ်း နေဟန်တူသည်။လက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း မြှောက်ပြီး သားသမီးဆိုသည့်
နာမည်ကို ဖျက်ချသည်နှင့်တစ်ပြိုက်နက် စိတ်ထိခိုက်သော အသံဖြင့် ချုံးပွဲချ ငိုကြွေးလေတော့သည်။ ဆရာက
"ကိုယ့်ရဲ့ အလိုအပ်ဆုံးနဲ့ အရင်းဆုံးလူဟာ မိဘနဲ့ သားသမီး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။မိဘက ကိုယ့်ကို ကြီးပြင်းလာတဲ့
အထိ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ သားသမီးကကိုယ့်ဝမ်းနဲ့ လွယ်ပြီး မွေးထားရတဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့က
အစားပြန်မရနိုင်တဲ့ လူတွေဖြစ်တယ်။ လင်ယောက်ျားက နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူလို့ရပါလျှက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့မဖျက်
ဘဲ ချန်ထားခဲ့ရသလဲ" ဟုမေးလေသည်။
ကျောင်းသားများကလည်း သူမ၏ အဖြေကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်နေကြသည်။
သူမက ..."အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အမျှ မိဘတွေက ကျွန်မကိုထားပြီး အရင် ထွက်သွားကြလိမ့်မယ်။
သား သမီးတွေကလဲ ကြီးပြင်းလာရင် ကျွန်မကိုခွဲပြီး သွားကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ကျွန်မ ဘေးမှာတသက်လုံး
ကူညီ ဖေးမမဲ့ သူဟာ ကျွန်မခင်ပွန်းသာ ဖြစ်ပါတော့မယ်။
ဒါကြောင့်သူ့ကို မဖျက်ဘဲ ချန်ထားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်တယ်" ဟု တည်ငြိမ်စွာပြန်ဖြေလေသည်။
ဘ၀မှာ အလိုအပ်ဆုံးလူဟာ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲ...?
"အသွားမတော် တလှမ်း၊ အစားမတော် တလုတ်" ဆိုသလို "အယူမတော် တသက်" လို့ရော
"အိမ်ထောင်မှု၊ ဘုရားတည်ဆေးမှင်ရည် စုတ်ထိုးဤသုံးမျိုး ချက်မပိုင်လျှင် နောင်ပြင်ရန် ခက်လိမ့်မည် " ဆိုတဲ့
အတိုင်းမြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက်တော့ဆရာပြောသလို မကောင်းရင် နောက်တယောက်ပြောင်းလို့ ဖြစ်ပါ့မလား...
မေးခဲ့ရင် ပြန်ဖြေဖို့ တော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး အဖြေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ ဖြေခဲ့တဲ့ အဲဒီ ကျောင်းသူကတောင် မိဘနဲ့ သားသမီးကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာ
တုံ့ဆိုင်းနေခဲ့သေးတယ်။ဖြေဖို့ အဖြေတောင် မရှိတဲ့ လူကတော့ အဲနေရာမှာတင် မူးလဲသွားမလား မပြောတတ်။
အခုတော့ အဖေ့ဘေးမှာ အမေပဲကျန်ပြီး အမေ့ဘေးမှာ အဖေပဲကျန်နေခဲ့တဲ့လူတွေကိုမေးရင် ဘာများပြန်ဖြေ
ဒါပေမဲ့ .. လောကကြီးမှာ . ကိုယ်ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်ခွင့်မရတာ ဟာ ..သဘာဝမို့ .. သူမ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ .. သူမရဲ့ 
ခင်ပွန်း ဆိုတာဟာလည်း သူမနဲ့တစ်သက်လုံး အဖော်ပြုပေးနိုင်ပါ့မလား ……..
ဒါဆို ..တို့ ..တစ်တွေ အတွက် အလိုအပ်ဆုံးသော ..သူ ဟာ ….
မိမိရဲ့ .. လက်တွဲဖော်လား ဆိုတာ ………….
ရှမ်းကလေး (အီးလ်မေးမှ စာအားပြန်၍တင်ပြလိုက်ပါသည်။)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:00 PM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 3:26 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 1:11 AM No comments:
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = စင်္ကာပူ (၃ - အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ ၀င်ငွေ အလုပ်ချိန်)
ကဲ..စာဖတ်သူများ..အလုပ်အကိုင်ကတော့ အရင်တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်း ကံကောင်းပြီးရတာရယ်၊ ပွဲစားနဲ့ လာတာ
ရယ်..စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ အလုပ်တွေကို ရနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ကရပြီဆိုတော့ လစာ..ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာ
ဥပဒေအရ...S pass ဆိုရင် ၁၈၀၀ ၊ PR ဆိုရင်တော့ ၂၀၀၀+ ရရပါ့မယ်။ Work Permit နဲ့ ကျတော့ ဘယ်လောက်
အပေါ်က အရာများကို ပြန်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ...
Work Permit (အလုပ်လုပ်ခွင့်ကဒ်)
သိကျတဲ့အရည်အချင်းပြ စာရွက်စာတမ်းတွေမရှိရင်..အများအားဖြင့် work permit (အလုပ်လုပ်ခွင့်) ကဒ်ရပါတယ်။
ဒီကဒ်ကိုင်တဲ့သူဟာ အလုပ်ရှင်ပြောင်းလို့ မရပါဘူး။ အလုပ်ရှင်ပြောင်းလို့ မရတော့ အလုပ်ရှင်ကောင်းရင် ကံကောင်း
ပြီး အလုပ်ရှင်ဆိုးရင်တော့ ကျိတ်မှိတ်ပြီးနေရင်နေ၊ မနေရင်လဲ အထုတ်ပိုးပြီးအိမ်ပြန်ယုံပါပဲ။ အလုပ်ပြောင်းရင်ကော?
ပြောင်းလို့ မရပါဘူး...ပြောင်းလို့ ရရင်တောင်မှ အလုပ်ရှင်တွေက ကိုယ်ဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ရလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ
ဒီအလုပ်လုပ်ခွင့်ကဒ်ကိုင်တဲ့သူများဟာ အများအားဖြင့် သဘောင်္ကျင်း၊ အိမ်ဖော်တို့ အဖြစ်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ အိမ်
ဖော်လုပ်ရင်တော့ တစ်လကို ၃၀၀ (သို့ ) ၅၀၀ အောက်ရပါတယ်။ အိမ်ရှင်နဲ့ အတူနေ၊ အတူစားရပါတယ်။ အများအား
ဖြင့် ပိတ်ရက်မရှိပါဘူး။ အလုပ်ချိန်ကတော့ သူတို့ နဲ့ အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ ၂၄ နာရီပေါ့ဗျာ။
အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုင်တဲ့သူဟာ အများအားဖြင့် သက်တမ်း ၃ နှစ်ပါ။ သက်တန်းကုန်ရင်တော့ အိမ်ပြန်ရပါတယ်။ အများ
အားဖြင့်တော့ ပြန်ပြီးရင် S- Pass လျှောက်ပြီးပြန်လာကြပါတယ်။
S-Pass (အရည်အချင်းရှိ အလုပ်လုပ်ခွင့်)
S- Pass ကတော့ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေရတဲ့ကဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကား (သို့ ) တရုတ်စကားတတ်တယ်၊
ပြီးတော့ ဘွဲ့ လက်မှတ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကဒ်ကိုရပါတယ်။ ဒီကဒ်ကိုင်တဲ့သူတွေကတော့ အများအားဖြင့်
သူနာပြု၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။
S- Pass ခြင်းတူရင်တောင်မှ ရတဲ့လခကတော့ကွာပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ၁၀၀၀ အထက်မှာပါ။ ဈေးရောင်း
တဲ့သူတွေအများအားဖြင့်တော့ ၁၂၅၀၊ ၁၁၅၀ လောက်ရကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ ၁၄၅၀၊ ၁၆၀၀
ဥပဒေအရ ၁၈၀၀ ရရမယ်လို့ ကျနော်ပြောတယ်ဟုတ်? အများအားဖြင့် မပေးကြပါဘူး။ လစာထုတ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လို
လုပ်ကြလဲဆိုရင်...လခကို ငွေသားနဲ့ ပေးပါတယ်။ ပြီးရင်အလုပ်ရှင်တွေက သူတို့ ဥပဒေအတိုင်းလုပ်ကြောင်း ပြသတဲ့
အနေနဲ့အလုပ်သမားများရဲ့ဘဏ်တွင်းကို ၁၈၀၀ လွဲပေးပါတယ်။ အဲဒီငွေတွေကို အလုပ်သမားတွေက ပြန်ထုတ်ပြီး
အပေါ်ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ၁၈၀၀ ရတာပေါ့ဗျာ။ အမည်ခံရတာပေါ့လေ။ အမှတ်ရတာကတော့ ၁၄၀၀ နဲ့ အောက်
ပါ။ အဲ..တစ်ချို့ လဲ အပြည့်ရကြပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေးတတ်ပါတယ်။ S-Pass များရဲ့ 
အလုပ်ချိန်ကတော့ ၈ နာရီကနေ ည ၅ နာရီပါ။
ဒါပေမယ့်..အများအားဖြင့်လုပ်ရတာကတော့ ၈ နာရီကနေ ည ၇-၈ နာရီထိလုပ်ရပါတယ်။ အိုတီ (အချိန်ပို) ရယ်လို့ 
မသတ်မှတ်ပါဘူး။ သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ မနက် ၈ နာရီကနေ ည ၅ နာရီကြားထိ မပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကို
ပေးပြီး..ဒီနေ့ အပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးပေးပါတယ်။ ကိုယ်က မပြီးရင် တာဝန်မကျေသလိုဖြစ်တော့ ပြီးအောင်ထိုင်လုပ်
ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဆိုရင် အလုပ်က ည ရ-၈ နာရီမှပြီးတာပါ။
S-pass ကတော့အလုပ်ရှင်ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ တစ်ချို့ ပြောင်းတာကတော့ အလယ်လူ (စင်္ကာပူပွဲစား) တွေနဲ့ သွား
ကြပါတယ်။ အဲ...မှာလဲ ပွဲစားခ ၂၀၀၀ ကျော်ပေးရတယ်တဲ့ဗျာ။
အများအားဖြင့်တော့ တစ်ပတ်မှာနားခွင့် ၁ ရက်ရကြပါတယ်။
PR (Permanent Resident) ရာသက်ပန်နေထိုင်ခွင့်
S-Pass ကိုင်ပြီးစင်္ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တာ ကြာရင်တော့ PR ခေါ်တဲ့ ရာသက်ပန်နေထိုင်ခွင့် ကိုလျှောက်လို့ ရပါ
တယ်။ နေထိုင်ခွင့်ရရင်တော့ လွှတ်လပ်တာပေါ့ဗျာ။ အလုပ်လဲ ပြောင်းခွင့်ရတယ်။ ရာထူးကြီးကြီးတွေမှာလဲ
လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး၊ လခလဲ များများရတာပေါ့။ များများဆိုတာကလဲ ၂၀၀၀ အထက်ပါ။
PR ကိုင်တဲ့သူများရဲ့ အလုပ်ချိန်တွေကလဲ S-pass လိုပါပဲ။ အချိန်မှီပြီးရမယ်ပေါ့ဗျာ။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေရဲ့ ကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုကတော့ အရာအားလုံးကို ကောင်းတဲ့ဖက်ကပဲကြည့်
ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်...နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရမှာလဲ? ဆိုတာကိုပဲကြည့်ပါတယ်။
ပြီးရင်....ရမယ့်လခကို မြန်မာကျပ်နဲ့ ပြန်တွက်ပါတယ်။ တွက်ပြီးရင်တော့ “ဟား...တော်တော်များတာပဲ” ဆိုပြီးတော့
အိမ်ရာပေါင်နှံပြီးသွားပါတယ်။ တခြားအကြောင်းအရာများဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ အလုပ်အခြေအနေ၊ အခက်အခဲ
စတဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာပြတဲ့ အရာတွေကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။ (မြန်မာ့သွေး..ရဲရဲတောက်တယ်ပေါ့ဗျာ)
အခက်အခဲတွေကြုံလာရင်လဲ..ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ (ခန္တီသိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံတာကိုးဗျ)။ ဟုတ်
တော့လဲဟုတ်ပါတယ်...ဘယ်ရောက်ရောက်..မြန်မာနိုင်ငံထက်သာတာကိုး။ အနည်းဆုံးတော့ လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီ
ရတယ်လေ။ အင်တာနက်လဲကောင်းတယ် (ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေများများရိုက်ပြီး၊ အွန်လိုင်းမှာတင်နိုင်တယ်လေ
ပြောတာပြောတာ..ကိုယ်လဲ..တစ်ယောက်အပါအ၀င်ပါပဲဗျာ)။ စင်္ကာပူက ဆရာတစ်ယောက်ပြောသလိုပေါ့ဗျာ...
နေပူမှာနေတဲ့လူက အရိပ်နည်းနည်းရတဲ့နေရာရောက်တော့ အရမ်းကိုကောင်းတယ်လို့ ထင်မြင်တတ်တာကိုး။
ထမင်းတစ်ပွဲ ဟင်းနှစ်မျိုး (ရေမပါ) ပုံပြီးစားရင်တော့ အနည်းဆုံး ၄ ဒေါ်လာပေးရပါတယ်။ အဲလိုစားရဖို့ ကလဲ
Foods Center တွေမှာမှရပါတယ်။
ရေဗူးကြီး နှစ်ဘူးကို ၁.၅၀ ပေးရပါတယ်။ (အများအားဖြင့်တော့ ပိုက်ရေကိုသောက်ကြပါတယ်။ အားလုံးကလဲ သန့် 
ရှင်းတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ သောက်ပြီး..မနက်ရောက်ရင်လည်ပင်းမှာ တစ်ခုခုခံသလိုခံစားရ
ဆေးလိပ်တစ်ဘူးကို ၁၁ ။
Tiger Beer နှစ်ဘူး ၇.၉၀ ။ (ဆေးလိပ်နဲ့ဘီယာကတော်တော်လေးကိုဈေးကြီးပါတယ်။ သွားမယ်ဆိုရင်တော့
ကြိုတင်ပြီးတော့တာ ဖြတ်ထားကြပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ မလွယ်ဘူး)
အခန်းခတစ်လကို အနည်းဆုံး ၃၅၀။
ရထားစရိတ်တစ်နေ့ ကို အနည်းဆုံး ၃ ဒေါ်လာ။
အကြောင်းအရာ ကျငွေ စုစုပေါင်း
ထမင်း (တစ်နေ့ ကို နှစ်နပ်ပဲစား..၀ိတ်လဲကျပိုက်ဆံလဲရပေါ့။) ၈ (၄ ကျပ်တန်)x 30 240
သွားလာရေ3းx 30 90
တစ်လကို အ၀တ်အစားမပါ၊ မုန့် မစား၊ ပိုက်ရေကိုသာသောက်ပြီး၊ ဘယ်မှလဲမလည် အလုပ်ကိုသာသွားတဲ့သူများ
အနေဖြင့်တစ်လကို ပျဉ်းမျှ ၆၈၀ လောက်ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့်တစ်လကို အနည်းဆုံး ၁၀၀၀
ကဲစာဖတ်သူတို့ ရေ..ပိုက်ဆံများများရသလို ကုန်ကျစရိတ်လဲအများသားဗျ။ အဲဒါတောင် အနည်းဆုံးဈေးတွေနဲ့ 
တွက်ထားတာ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် အကြွေးတွေလဲပေးရ၊ အိမ်ကိုလဲ ပြန်ပို့ ရနဲ့ .... ပြီးတော့ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာ
ဆိုရင်လဲ..လျှော်ရဖွတ်ရ၊ အခန်းသန့် ရှင်းရေးလုပ်ရနဲ့ ....သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လဲ မတွေ့ နိုင်..မောမောနဲ့ ပဲ အခန်း
ထဲမှာအချိန်ကုန်လို့ နောက်တစ်ရက်များဆိုရင်လဲ..အလုပ်ကိုပြန်ဆင်းရနဲ့ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူများအနေနဲ့ တော့ ပိုပြီးတော့ အထီးကျန်နိုင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားရင်လဲ
ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာကြတာကလား။ မသိတဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ဖို့ ဆိုတာကလဲ အခက်သားပေကိုးဗျ။
အဲခရစ္စယန် ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတော့ ဘုရားကျောင်းသွားနိုင်တယ်။ တစ်ချို့ ဘုရားကျောင်းမှဆိုရင် လူသစ်
လာရင်..မိတ်ဆက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲလိုမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ ပဲ..သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရသွားတာလဲရှိပါတယ်။
(ကိုယ်တွေ့ ပါ။ မည်သည့်ဘာသာဖက်မှ ဘက်မလိုက်။ စင်္ကာပူမှ ဘ၀ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်စေလို၍သာ)
အဲ..ကုန်ဈေးနှုန်း...ကုန်ဈေးနှုန်း..စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူများဟာ ခြိုးချုံချွှေတာပြည်မြန်မာ ဆိုတဲ့အတိုင်း
တော်တော်လေးကို ခြိုးချုံစွာနဲ့ နေရပါတယ်။ (၀င်ငွေနည်းတဲ့သူများပေါ့ဗျာ)။
ဒါပေမယ့်..ဟိုမှာနေတဲ့သူများပျော်လားဆိုတော့လဲ ပျော်ကြပါတယ်။ မီး ၂၄ နာရီရတယ်။ ရေခဲသေတ္တာနဲ့ ၊ ဟန်းဖုန်း
နဲ့ ၊ တီဗွီနဲ့ ..လူတန်းစေ့နေနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ လူချမ်းသာပြီး၊ စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူများလဲရှိသလို.............. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်
ရာတိုးတက်ပြီး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မပျော်ပိုက်သူများလဲရှိပါတယ်။
အများအားဖြင့်တော့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး...စိတ်ဖိစီးမှုတော်တော်လေးကိုခံကြရပါတယ်။
ကဲ..စာဖတ်သူများရေ...ကျနော်မျိုး..ရွာသားတော့လေရှည်နေတာနဲ့ ..ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေတယ်။ အချိန်
နီးပြီလေမို့ ၊ ဆီးတော်မြင်းနဲ့ဒုန်းဆိုင်းလိုက်အုန်းမယ်။ နောက်မှတွေ့ ကြတာပေါ့ဗျာ။
ရှမ်းကလေး (တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အခြေအနေခြင်းမတူနိုင်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ဖတ်ရှုပါ။ (ဒါပေမယ့်
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:40 PM No comments:
ခုခေတ်မှာ အရွယ်ရောက်လို့ ပညာစုံသော်ရှိ၊ မစုံသော်ရှိ..လူငယ်တိုင်းလိုလိုက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်လိုကြပါ
တယ်။ ရန်ကုန် နဲ့ ..တခြားမြို့ တွေမှာနေတဲ့လူငယ်တွေကတော့ စင်္ကာပူကိုအလုပ်သွားလုပ်သလို..ကျန်မြို့ ကလူငယ်
တွေကတော့ နီးစပ်ရာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ မလေးကိုသွားအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။
အဲလိုသွားလုပ်ရတာကလဲ..နိုင်ငံခြားကပြန်လာတဲ့သူတွေပြောပြတဲ့ အတွေ့ အကြုံက စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်း..၀င်ငွေ
လဲကောင်းဆိုတော့ မသွားချင်တဲ့သူမရှိတာမဆန်းပါဘူးလေ။ အများအားဖြင့်..ကျနော်တို့ ကြားရတာကလဲ ဘယ်လောက်
ချိုတစ်လှည့်ဆိုတာ..တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ကျနော်တို့ ကမေ့တတ်တာကိုး..
၁) အနဲဆုံးတော့ အင်္ဂလိပ်ကောင်းမွန်စွာပြောတတ်ရမယ်။ အီးရောင်ဝါးဖြစ်ရင်တော့မသွားပါနဲ့ ..ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုရင်
ဟိုမှာက အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကောင်းရင် အလုပ်ကောင်းကောင်းရပါတယ်။
၂) အင်္ဂလိပ်မရရင်တော့ တရုတ်စကားတတ်ရပါမယ်။ နှစ်ခုလုံးတတ်ရင်တော့ သူများထက်နာတစ်ဖျားသာတာပေါ့ဗျာ။
၄) အလုပ်ကျွမ်းကျင်ကြောင်း၊ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ကြောင်းပြတဲ့ စာရွှက်စာတမ်းရှိရပါမယ်။ (အတုတော့မရဘူး
၅) စာရွှက်စာတမ်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာရှိရပါမယ်။ ဥပမာ..တက္ကသိုလ်အောင်လက်မှတ်တို့ ပေါ့ဗျာ။ တက္ကသိုလ်
အမှန်ဖြစ်ကြောင်းပေါ့။ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်တို့ ၊ နယ်က တက္ကသိုလ်တို့ ဆိုရင်ပိုပြီးတော့တောင်လိုပါတယ်။ ဟိုကလူ
တွေက ရန်ကုန်နဲ့ ၊ မန္တလေးလောက်ပဲသိတာ။ အဲမှာပဲ တက္ကသိုလ်ရှိတယ်လို့ ထင်တာလေ။
၆) ကြံ့ ခိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိရမယ်..
ရ) ပိုက်ဆံရှိရပါမယ်။ (ပြောမှလားလို့ တော့မတွေးလိုက်ပါနဲ့ )။ ပေါင်နှံ၊ ချေးဌားပြီးသွားရရင်တော့ ငါးခေါက်လောက်
တစ်ချို့ ကြတော့ ဆွေမျိုးတွေဆီအလည်သွားရင်းနဲ့အလုပ်လျှောက်ပြီး အလုပ်ရသွားလို့ဟိုမှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်သွား
တာလဲရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ ကြတော့ အလည်သက်သက်သွားရင်းနဲ့ အလုပ်တွေ့ လို့ လျှောက်ရာက အလုပ်ရသွားတာလ
ဒါပေမယ့်ခုတော့..ပွဲစားနဲ့ သွားတာများသွားပါပြီ။ ပွဲစားနဲ့ သွားပြီးအဆင်ပြေတာရှိသလို..မပြေတာတွေလဲအများကြီး
ပါ။ ကံကောင်းရင်..ကောင်းသလို..မကောင်းရင်လဲ..မကောင်းသလိုပေါ့ဗျာ။ (အပြစ်ပုံချဖို့ လူရှာမတွေ့ ဘူးလေ) ကျနော့်
သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးဟာ..ပွဲစားက နေစရာပေးတယ်လို့ ပြောပြီးသွားလိုက်တာ..ယောင်္ကျားအယောက် ၂၀ နေတဲ့
အိမ်မှာသွားတည်းရလို့ ...နောက်တစ်ရက်မှာ..ကိုယ့်ဖာသာအခန်းရှာလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါအပြင်..ကြိုတင်ပေးထား
တဲ့ တစ်လစာအိမ်ခနဲ့စရံတွေပါရှုံးပြီး၊ ပြန်မရဘူး။ (အဲဒါကြောင့် ပိုက်ဆံရှိရမယ်လို့ ပြောတာပေါ့)
သင်တန်းနှစ်လလောက်တက်လိုက်ရတယ်။ ပိုက်ဆံလဲမရဘူး။ စားစရိတ်တွေကိုတော့ ကုမ္ပဏီကကြိုတင်ထုတ်ပေး
ပါတယ်။ ပြီးတော့ပြန်ဆပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ပထမတစ်နှစ်နဲ့ဒုတိယနှစ်ကတော့..သူအလုပ်လုပ်ပြီးအကြွေးဆပ်နေပါတယ်။
(ဒါကြောင့် ပေါင်နှံပြီးသွားရင် ငါးခေါက်လောက်စဉ်းစားပါလို့ ပြောချင်တာပါ..ပိုက်ဆံလဲလိုတာပေါ့ဗျာ)
ဒါတွေက ယေဘူယျအားဖြင့်ကြုံတွေ့ ရတာပါ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 12:50 AM No comments:
လေယာဉ်ဘီးသည် လှိမ့်ကာလှိမ့်ကာနှင့် စင်္ကပူနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်သွားလေသည်။
အထုတ်အပိုးများကို သယ်ဆောင်ကာ လှေယာဉ်ကွင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့လေ၏။
၀င်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပင် လက်ဆွဲအိတ်များကို စစ်သည့် နေရာသို့ ရောက်လာသည်။ (အရင်တုန်းကတော့မရှိဘူး)
သို့ နှင့် ရှိသမျှကို အစစ်ဆေးခံလိုက်ပြီးနောက် လ.၀.က သို့ ဖြတ်ရန်သွားခဲ့သည်။
လ.၀.က နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စစ်တဲ့နေရာစီစဉ်ထားတာမဆိုးဘူးဗျ။ ပန်းအိုးတွေဘာတွေနဲ့ ။ နည်းနည်းစိမ်းစိမ်းစိုစိုပါပဲ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးပုံရတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ပန်းအိုးတွေမရှိဘူး။ အဲ..မပြောင်းမလဲပဲရှိတာက
တော့ တန်းစီတဲ့လူတွေတော်တော်များများက မြန်မာနိုင်ငံက လာတဲ့ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမတွေပါပဲဗျာ။
လ.၀.က ကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီးချိန်မှာ အိတ်တွေကိုသွားယူပါတယ်။ အိတ်ယူပြီးတာနဲ့ ..တာဝန်ရှိတွေက လာခေါ်ပါ
တယ်ဗျာ။ ကျနော့်အိတ်က ကြီးနေလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာတွေအခွန်ဆောင်စရာရှိလဲဆိုပြီးတော့ အိတ်တွေကိုပြန်စစ်
ပါတယ်။ (စစ်လွန်းလို့စိတ်တောင်နောက်မိလေရဲ့ )
နောက်ဆုံးတော့လဲ လေယာဉ်ကွင်းအပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားပါတယ်ဗျာ။ အဲတာနဲ့လာကြိုတဲ့ကားပေါ်တက်ပြီး
တည်းခိုတဲ့ နေရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ (အောက်ပုံထဲက ကားပါ)။ လာကြိုတဲ့အတွက် လေယာဉ်ကွင်းကနေ တည်းခိုခန်း
ကို ၁၃ (စင်္ကပူဒေါ်လာပေါ့ဗျာ..သူ့ နိုင်ငံမှာသူ့ ငွေပဲသုံးရတာပေါ့) ပေးရပါတယ်။ ကိုယ်ကကြိုမယ့်ကားမရှိရင်..
ပစ္စည်းကိုယူလို့ ထွက်လာရင် အပေါက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတာရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်
ကို ၉ ဒေါ်လာပေးရပါတယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ဟိုတယ်အထိလိုက်ပို့ ပေးပါတယ်။
တည်းခိုခန်းဆိုပေမယ့်..အဆောင်လိုဆိုရင်ပိုပြီးတော့မှန်ပါတယ်ဗျာ။ (ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ မေ့သွားတယ်) တစ်ညကို ၂၀ ပေးရ
ပါတယ်။ အများနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့နေရတာပါ။ အခန်းထဲမှာ နှစ်ထပ်ကုတင်တွေထားထားတယ်။ တစ်ခန်းမှာ လူ ၁၂
ယောက်အိပ်ရပါတယ်။ အဲ..မနက်စာကျွှေးတယ် (ပေါင်မှန့် နဲ့ကြက်ဥပြုတ် (၂ လုံးရတယ်))။ မနက်စာဆိုပေမယ့် ၁၂
ကိုယ်ပိုင်အခန်းတွေလဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးဈေးကြီးတယ်။ တစ်ညကို ၄၀ ပေးရပါတယ်။ အဲတာလဲ နှစ်ထပ်ကုတင်
နဲ့ ပါပဲ။ လွှတ်လပ်တာပေါ့လေ။ ဘာတွေထားထားပေးလဲဆိုတော့ တီဗွီနဲ့ အောက်စက်ထားထားပေးပါတယ်။ တီဗွီက
လှိုင်းဖမ်းလို့ မရဘူးလေ။ ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်လို့ ရတယ်.. (ခွေရှိရင်ပေါ့ဗျာ)။ အဲ..အင်တာနက်ကတော့ အလကား သုံးလို့ 
ရောက်တာနဲ့ကျနော်တို့ လဲ အိတ်တွေထားပြီး မဆိုင်းမတွပဲ..ဘယ်သွားရမယ်မှန်းမသိတာနဲ့စင်္ကပူက အဓိက
သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ ရထားဆီကိုရောက်လာပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ စင်္ကပူရထားလှိုင်းတွေပါ။ ကိုယ်သွားမယ့်နေရာကို ကြည့်၊ ရောက်မယ့်လှိုင်းကိုရွှေးစီးပြီးသွားရတာ
ပေါ့လေ။ ဘယ်သွားရမှန်းမသိတဲ့ ကျနော်တို့ ဟာ..မြန်မာပြည်မှ လူများအများဆုံးသွားရောက်စုစည်းဆုံရာ
ဘန်နီဆိုလာ ဗလာဇာ ကိုသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ချီတက်လိုက်ပါတယ်။
ရထားမစီးခင်မှာ လက်မှတ်ဝယ်ရပါတယ်။ ၇ ဒေါ်လာပေးရတယ်။ ကဒ်ထဲမှာလဲ ၇ ဒေါ်လာရှိတာပေါ့။ အဲဒီကဒ်က
ရထားစီးလို့ လဲရသလို..ဘတ်ကားတွေလဲစီးလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်လျှောက်လည်ပတ်ပြီးရင်လဲ..ကဒ်ထဲမှာ ငွေဘယ်
လောက်ကျန်တာကို စစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ။ ကဒ်ထဲက ပမာဏ စစ်ချင်ရင် အပေါ်ကလို စက်တွေမှာစစ်လုို့ ရသလို..ငွေလဲ
ကဒ်မှာလဲ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခါသွားကဒ်ရယ်လို့ လဲ ရှိပါတယ်ဗျာ။ အပေါ်ကပြောသွားတဲ့ကဒ်က ကြိမ်ဖန်များစွာ
သုံးနိုင်တဲ့ကဒ်ပါ။ တစ်ခါသုံးကဒ်ထက်ပိုပြီးဈေးသက်သာတယ်။ ကိုယ်ပြန်ခါနီးမှာ ကဒ်ထဲမှာငွေကျန်နေမှာပူပန်စရာ
မလိုပါဘူးဗျာ။ ကိုယ်ပြန်အပ်ရင်..ပြန်ရပါတယ်(ထင်တာနော်..။မပူပါနဲ့ ဗျာ..ပိုတယ်ဆိုတာက ခပ်ရှားရှားပါ။)
အပေါ်ပုံကတော့ ရထားသွားစီးရာနေရာတွေပါ။ လူတွေတော်တော်များပါတယ်။ ရုံးတက်ချိန်၊ ရုံးဆင်းချိန်ဆိုရင်တော့
လူအရမ်းကြပ်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြပ်လဲ ဆိုတော့..မြန်မာနိုင်ငံက ဘတ်စ်ကားတိုးစီးရသလိုပါပဲ။
ကဲအပေါ်ပုံကတော့ စင်္ကာပူနဲ့ ကျွှမ်းဝင်တဲ့သူများသိမှာပါ။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေသွားရောက်ဆုံစည်း
ဘန်နီဆိုလာ ပလာဇာကတွင်းက ဈေးဆိုင်များဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ ဘန်နီဆူလာ ပလာဇာတွင်းက မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပါပဲ မြန်မာပစ္စည်းများရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ
နဲ့ စည်စည်ကားကားရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေလဲတော်တော်လေးကိုစုံပါတယ်။ ကွမ်းရာ ကအစရရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ဈေးနှုန်းတွေကတော့ နိုင်ငံခြားမှာဆိုတော့လဲ နိုင်ငံခြားလိုပဲပေးရပါတယ်။ ထမင်းတစ်နပ်လောက်စားရင်တော့ ၄-၅
တော့ပေးရပါတယ်။ ကွမ်းရာကတော့ ထွေးချင်တိုင်းမထွေးနိုင်လို့မ၀ယ်စားဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းမသိပါဘူး။
ကျနော်ရောက်တဲ့အချိန်က တရုတ်ပွဲတော်နဲ့ ကြုံလို့ဒီလိုမျိုးနဂါးပုံတွေကိုတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ ခလတ်ကွေ (MRT station)
မှာပါ။ အဲဒီ..နားမှာ ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ ဆိုင်တိုင်းကလဲ ပြင်ဆင်ထားတာတော်တော်လေးကိုလှပပါတယ်။
အတွဲတွေအနေနဲ့ ညစာသွားသောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့နေရာလို့ တော့ ကျနော်မှတ်ချက်ချတယ်။ သွားစားဖြစ်ရင်တော့
၁၀၀ ကျော်ကျော်ဆောင်သွားပါလို့တိုက်သွန်းလိုပါတယ်။
စင်္ကပူမှာ ဘယ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်တိုက်ခန်းတွေကိုပဲတွေ့ ရသလို...လွှတ်တဲ့နေရာတွေကလဲ အပေါ်ကပုံလိုပဲ အသစ်
ဆောက်နေတာကို နေရာတိုင်းမှာ ရိုးအီအောင်တွေ့ ရပါတယ်။
အပေါ်နဲ့အောက်ပုံကလိုပဲ ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်ကြည့်ကြည့် တိုက်တာအခန်းတွေကိုတွေ့ ရပါတယ်။
တိုက်တွေကို အရမ်းတွေ့ ရလို့ ရိုးအီသွားရင် စိတ်တွင်းမှာ ဖြေသိမ့်နိုင်တာကတော့ “သြော်...တစ်နေရာနဲ့တစ်နေ
ရာက တိုက်တွေအရောင်မတူညီကြဘူးပဲ” ဆိုပြီးတော့ အံ့သြနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ကျောက်တိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ “တိုက်တွင်းမှာမွှေး၊ တိုက်တွင်းမှာ ကြီး၊ တိုက်ထဲမှာပဲ
အလုပ်လုပ်၊ တိုက်ထဲမှာပဲ သေဆုံး” ထင်ပါရဲ့ ။ တစ်ချို့ နေရာမှာဆိုရင်..ပန်းခြံဆိုရင်လဲ တိုက်ပေါ်မှာပဲ လုပ်ထားတယ်။
တိုက်နဲ့ ကားနဲ့ နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စင်္ကာပူသွားနေပါလို့ ညွှန်ချင်ပါတယ်ဗျာ။
သစ်ပင်တွေလဲရှိပါတယ်။ နေရာတော်တော်များများမှာ သစ်ပင်တွေစိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ အရမ်းကိုအေးချမ်းပါတယ်။ စင်္ကာပူ
အပေါ်ပုံကတော့ SIC ကောလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ ကျနော်သွားစားခဲ့တဲ့ တရုတ်အစားအစာပါ။ ထမင်းနဲ့ဟင်းနှစ်မျိုးကို ၄ ဒေါ်လာပေးရပါတယ်။ အစား
အစာတွေအများဖြင့်တော့ ပျမ်းမျှအနည်းဆုံး ၄ ဒေါ်လာလောက်တော့ပေးရပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ Financial Center လို့ သိရပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဗဟိုချက်မပါ။ ဒီနေရာမှာ ဘဏ်တွေ
နဲ့ တခြားငွေကြေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများစုစည်းတဲ့နေရာပါ။
စင်္ကာပူရောက်ပြီဆိုရင်တော့၊ သူတို့ နိုင်ငံရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ ဒီ ခြင်္သေ့တစ်ပိုင်း၊ ငါးတစ်ပိုင်း (နာမည်မေ့သွားပြီ)
ဒီနေရာကတော့ ဓါတ်ပုံလာရိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ တော်တော်လေးကိုစည်ကားပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ အဝေးကနေရိုက်ထားတာပါ။ စင်္ကာပူရဲ့ ညအလှတွေပေါ့ဗျာ။
ဒါကတော့ NUS (National University of Singapore)၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းဝင်းကတော်တော်လေးကိုကျယ်ပါတယ်။ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကိုသွားဖို့ အတွက် ကားတွေလဲထားပေးပါ
တယ်။ ကိုယ်သွားလို တဲ့အဆောင်ကိုရောက်မယ့် ကားကိုမှတ်တိုင်မှာ (ကျောင်းဝင်းတွင်း)စောင့်စီးရုံပါပဲ။ ပိုက်ဆံလဲ
ဒီလိုမျိုးကျယ်တဲ့ဘော်လုံးကွင်းရှိတဲ့အတွက်...ဒီတက္ကသိုလ်က ပိုက်ဆံတော်တော်ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူ
ဒါကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဘတ်စ်ကားပါ။ ပုံအောက်ဆုံးက ခရမ်းရောင်နဲ့ အ၀ါရောင်စက်က ကဒ်ဖတ်တဲ့စက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဒ်ကတော့ ရထားကဒ်ကိုသုံးရပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားစီးမယ်ဆိုရင်...ကားခေါင်းဖက်ပေါက်ကတက်ရပါတယ်။ ကားခေါင်း
ဘက်မှာလဲ ကဒ်ဖတ်တဲ့စက်ရှိပါတယ်။ ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ကဒ်ဖတ်တဲ့စက်ကို ကဒ်နဲ့ ထိပေးရပါတယ်။ အဲချိန်မှာ
အသံထွက်လာပါမယ်။ ကဒ်မရှိရင်တော့ ကားမောင်းသူကို ကားစရိတ်မေးပြီး၊ သူ့ ပေးက ပုံးမှာအကြွေတွေထည့်ရပါတယ်။
ကျနော်တွေ့ တာတော့ အကြွေတွေထည့်တာပဲတွေ့ တယ်။ အရွက်တွေရမရတော့မသိဘူး။ (ကဒ်ဝယ်ထားရင်ပို အဆင်
မှတ်တိုင်ရောက်လို့ ကားပေါ်ကဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကားရဲ့ အနောက်ပေါက်ကနေဆင်းရပါတယ်။ ကိုယ်မဆင်းခင်မှာ
ကဒ်ဖတ်တဲ့စက်ကို ကဒ်နဲ့ ငွေရှင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ။ ကားပေါ်တက်တဲ့တုန်းကအတိုင်းပါပဲ။ ကဒ်ဖတ်တဲ့စက်ကို ကဒ်နဲ့ထိပေး
လိုက်ရင် အသံထွက်လာမယ်။ ပြီးရင်ကားပေါ်ကနေဆင်းလို့ ရပါပြီဗျာ။ ငွေရှင်းဖို့မေ့သွားရင်တော့..နောက်ပိုင်းမှာ ဒါဏ်ငွေဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
စင်္ကာပူမှာနေရာတုိုင်းကြည့်လိုက်ရင် တိုက်တွေရှိရင်ရှိ မရှိရင်လဲ အပေါ်ပုံကအတိုင်းဆောက်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုနေရာတော်
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဘန်နီဆူလာဗလာဇာမှာ သွားပြီးတွေ့ ဆုံကြလို ထိုင်းလူမျိုးတွေကြတော့ Golden Mind
ကိုသွားကြပါတယ်။ ထိုင်းအစားအစာတွေစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကိုသွားရပါတယ်။
ထိုင်း ဒီစကို ဆိုပေမယ့်...အပေါ်မှာဘာမှသိပ်မတွေ့ သလိုပဲ။ ကျနော်ကပဲ သတိမထားမိလို့ လားတော့မသိပါဘူး။ သေချာ
တာကတော့ အနှိပ်ခန်းတွေရှိပါတယ်။ (အဲဒါကလဲ နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။)
ဒါကတော့ တစ်ခြားကျွန်းကိုစီးသွားတဲ့ယာဉ်ပါ။ ဆန်ဒိုဇာဆိုတဲ့ လူလုပ်ထားတဲ့ကျွန်းကိုသွားရင် ရထားကိုသုံးလို့ ရသလို
အပေါ်ကအတိုင်း..သွားလို့ လဲရပါတယ်။ ရထားနဲ့ သွားရင် ၃ ဒေါ်လာပေးရပါတယ်။
ဒီနေရာကို Harbour Front လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၃ ထပ်မြောက်မှာတော့ ဆန်ဒိုဇာကိုသွားတဲ့ရထားရှိပါတယ်။ ဒီနေရာက
တော့...စတိုးဆိုင်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်ပါ။ ရေကြီးနေတာမဟုတ်ပါဘူး..အလုလုပ်ထားတာပါ။ ရေတွေကစားချင်လဲ
ကစားလို့ ရပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ တခြားကျွန်းကိုတွေ့ နိုင်ပါတယ်။ လုပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့ တော့ပျင်းပျင်းနဲ့ဆန်ဒိုဇာဘက်လစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရထားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တာနဲ့ အပေါ်က လမ်းညွှန်
ဒါကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ ယူနီဘာဇယ် ကြီးပေါ့ဗျာ။
အပေါ်ပုံကတော့ ၀င်ခဈေးနှုန်းတွေကိုရေးထားပါတယ်။ (မတွေ့ ရရင် နိပ်လိုက်ပါ၊ ပုံကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်) ဈေးကြီး
လို့ မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ၀င်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေပြောပြတာကတော့ တော်တော်လေးကိုလှပပြီး အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်း
ပါတယ်တဲ့ဗျာ။ အကယ်၍ ၀င်ဖို့ စိတ်ကူးထားရင်တော့ စောစောသွားပါ။ အဲဒါမှ အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကို တွေ့ မြင်
ဒါကတော့ ကာစီနို (လောင်းကစားရုံ) အ၀င်ဝပေါ့။ နေရာတိုင်းမှာ လမ်းညွှန်ဆိုင်းပုဒ်တွေရှိတော့ သွားရလာရတာအဆင်
ပြေပါတယ်။ လမ်းမသိရင်လဲ..တွေ့ တဲ့သူကိုမေးနိုင်ပါတယ်။ ကာစီနိုက နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရင် အခမဲ့ဝင်လို့ ရပါတယ်။
၀င်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ဘိုးဖိနပ် (Shoe) ၀တ်ရပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်းကတော့ သာမန်အင်္ကျီနဲ့ လဲ ရပါတယ်။
(စွတ်ကြယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ)။ ပြီးတော့ နိုင်ငံကူးစာအုပ်ပြရပါတယ်။
ဒါကြောင့်အတွင်းကိုသွားပြီး စနည်းနာချင်ရင်..အပေါ်က အရာတွေဝတ်ပြီး၊ ပါစရာရှိတာပါသွားဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်
၀င်ခွင့်မပြုပါဘူး။ အတွင်းမှာတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။
အများအားဖြင့်ကစားစရာတွေက Slot Machine လို့ ပဲခေါ်မလားမသိဘူး။ ကိုယ်က ပိုက်ဆံထည့်ပြီးနှိပ်လိုက်ရင်
စပြစ်သီးတို့ ၊ 777 တို့ ရှိတဲ့အရာပါ။ ဒီစက်တွေမှာဆော့ချင်ရင် ၁၀ ဒေါ်လာအနည်းဆုံးထည့်ရပါတယ်။ အကြွေ
လှဲစရာလဲမလိုပါဘူး။ အကြွေစေ့ရှိရင်လဲထည့်နိုင်သလို..အကြွေမရှိရင်လဲ..ပိုက်ဆံထည့်တဲ့ခွက်ထဲထည့်ပြီးကစားလို့ 
ရပါတယ်။ ကိုယ်ဆော့လို့ ပြီးသွားရင်..Print ကိုနှိပ်လိုက်ရင်..ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံကိုပြန်အန်းတဲ့ စာရွက်ထွက်လာပါတယ်။
ဒီလိုစက်နဲ့ မဆော့ချင်ဘူး၊ ၀ိုင်းထိုင်ပြီးဆော့တဲ့ကစားဝိုင်းတွေမှာဆော့ချင်ရင်တော့ စကားချင်တဲ့စားပွဲကိုသွားပြီး
အကြွေ chip လဲလို့ ရပါတယ်။ အများအားဖြင့် သူတို့ ဆော့တာကတော့ ၅ ဒေါ်လာအနည်းဆုံးပါ။ အများအားဖြင
့်တော့ ၂၅၊ ၅၀၊ ၁၀၀ တွေဆော့ကြပါတယ်။
ကျနော်လဲ..အဲဒီနေ့ တုန်းကကံစမ်းလိုက်တာ.. ကံဆိုးမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။ ကောင်းတာကတော့ ဒီလိုပြန်ပြောပြ
အပေါ်ပုံက ဟိုတယ်ပါ။ ဘန်နီဆိုလာyလာဇာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဒီလိုမျိုးတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟိုတယ်ရယ် ခြင်္သေ့နဲ့ဒူးရင်းသီးအဆောက်အအုံက ဖိုခုံနောက်ပုံစံတည်ရှိပါတယ်။ ကြားမှာတော့ရေနဲ့ ခြားထားပါတယ်။
ဘန်နီဆိုလာဗလာဇာကနေ ဟိုတယ်ဘက်မျက်နှာမူပြီးလျှောက်လာရင်တော့ ဘော်လုံးကွင်းကိုဖြတ်ရပါတယ်။ ဖြတ်ပြီး
ရင်တော့ဒီမှတ်တိုင်ကို တွေ့ ရပါမယ်။ ဒီမှတ်တိုင်က ကျူးကျော်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ပြီးကျဆုံးသွားတဲ့လူတွေကို မြုပ်ထား
ကျောက်တိုင်ကိုကျော်ပြီး ဘယ်ဖက်ကိုကြည့်ရင်တော့ ဒီလိုမျိုးသစ်ပင်တွေမိုးထားတဲ့လမ်းကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလမ်း
အတိုင်းတည့်တည့်လျှောက်သွားရင်တော့ ဒူးရင်းသီး (Esplannde Theatres) ကိုရောက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ စီးပွားရေးဇုံ/ဗဟို ရဲ့နေ့ ခင်းရှုခင်းလေးပါ။
အံ့သြမိလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်လာတာပါ။ အစထင်တာက အားကစားလုပ်တဲ့လူတွေလို့ ထင်တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှမဟုတ်မှန်း
နိုင်ငံရေးထက် ဘာသာရေးဆန္ဒပြကြတာပါ။ ဒီလိုပုံတွေခင်းကျင်းပြသပြီး လူတွေကတော့ တရားထိုင်သလိုမျိုးလုပ်ကြ
ဒါကလဲ စီးပွားရေးဇုံပါနဲ့ခြင်္သေ့ပုံပါ။ ဒီလိုမျိုးတည့်တည့်ကြည့်ရင်တော့ ဘယ်ဖက်မှာ ဒူးရင်းသီးအဆောက်အအုံရှိပါ
ဒါကတော့ ဒူးရင်းသီးအဆောက်အအုံရဲ့ ရှေ့ ကနေပြီး ဘယ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်တွေ့ ရတဲ့မြင်ကွင်းပါ။ ဒီအဆောက်
အအုံရဲ့ ညာဖက်မှာတော့ ခုဏက သဘောင်္ဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေ့ တုန်းက လူတွေတော်တော်များများ ဇွန်လွှတ်နေ
ကြပါတယ်။ အနီးကပ်ဆွဲတာအဲလောက်ပဲရပါတယ်။ ပြီးတော့ The Lord of The Ring ရုပ်ရှင်ကားထဲက The Two
Towers ကိုပြေးပြီးသတိရလိုက်တာနဲ့ ရိုက်လာတာပါ။
ကဲဒါကတော့ ဒူးရင်းဒီအဆောက်အအုံကြီးပါ။ ဒီအဆောက်အအုံရဲ့ အပြင်ဖက်မှာတော့ စတိတ်ရှိုးစင်အသေးလေးတွေရှိ
အပေါ်ပုံကတော့ ဒူးရင်းသီးထဲကမြင်ကွင်းပါ။ လူတွေဝိုင်းဖွဲ့ ပြီးတော့ ဇွန်တွေလုပ်နေကြပါတယ်။
ဒါလဲပဲ..စတိတ်ရှိုးပါပဲ။ တရုတ်သီချင်းတွေဖျော်ဖြေနေပါတယ်။ (အသံမကြားရလဲ..မြင်ယောင်ကြပါရန်)
ဟိုတယ်နဲ့ လကိုရိုက်တာပါ။ စင်္ကာပူမှာတော့လည်စရာဆိုလို့စတိုးဆိုင်တွေရှိတယ်။ တိုက်တာတွေရှိတယ်။ ဈေးလဲကြီး
ပါတယ်။ ညဆိုရင်လဲ..နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ နှိုက်ဂလပ် တွေနေရာတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်။ ညပိုင်းမှာဆိုရင်
စင်္ကာပူနိုင်ငံက Vegas လိုမျိုး...ပျော်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့မြို့ လိုမျိုးပါပဲ။ နေ့ ပိုင်းကြတော့ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့လူတွေ
နဲ့ရှုပ်ရှပ်ခတ်နေတတ်ပါတယ်။
တွေ့ ပြီးရင်ကွဲ..ရောက်ပြီးရင်လွဲ..ဆိုတဲ့အတိုင်းအချိန်တန်တော့လဲပြန်ရဆိုတဲ့ သဘာဝရဲ့ နိယာမအတိုင်း လေဆိပ်ဆီကို
လေဆိပ်ရဲ့ ဝင်ပေါက်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့လဲ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ....အထုတ်တွေလွယ်ပိုးပြီး..ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိုပြန်ပါတော့
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:28 AM No comments: